Hogaamiyaasha xisbiyada oo diiday in ay la istaagaan gudoomiyaha cunsuriyiinta SD | Somaliska
Hogaamiyaasha xisbiyada oo diiday in ay la istaagaan gudoomiyaha cunsuriyiinta SD
Hogaamiyaasha xisbiyada Socialdemokraterna iyo xisbiga bidixda ee Vänsterpartiet ayaa diiday in ay ka qeyb galaan dood uu qabanqaabinayo telefishinka SVT. Hogaamiyaasha ayaa sheegay in aysan dooneyn in ay isku goob istaagaan hogaamiyaha xisbiga cunsuriga SD Jimmie Åkesson.
Xisbiyada ayaa sheegay in aysan la dhacsaneyn qaabka loo soo agaasimay dooda oo laga dhigayo labo dhinac oo kala ah mucaaradka iyo dowlada. Balse xisbiyadaan ayaa sheegay in aysan SD iyo iyagu isku mucaarad ahayn.
Maamulka telefishinka SVT ayaa ka biyo diiday arintaan iyaga oo sheegay in ay tahay arin aan la aqbali karin. Waxay sheegeen in hogaamiyaashu ay u istaagayaan qaab wareegsan oo aan lagu qaldi karin in ay isu koox yihiin. SVT ayaa ugu dambeyntii sheegay in aysan aqbali karin in xisbiyada siyaasadu ay go’aamiyaan qaabka ay u shaqeynayaan.
Hogaamiyaha cunsuiryiinta SD ayaa sheegay in uu ku qoslay hadalka hogaamiyaasha kale, isaga oo intaas ku daray in dabeecadooda hoose ay meel layaable marayso.
Ninkaan waxa uu ka taajiray qaxootiga Sweden